Nhau - Makorokoto nekubudirira kwezvigayo zvemapepa zveMuda kuMalaysia.
Munguva pfupi yapfuura, Taizhou Forest 5200 mapepa emuchina anoshanda kumhanya zvinobudirira inosvika 900m / min uye inowana kugadzikana kushanda. Elemetents ese anodiridza akagadzirwa naSICER.
Nekambani yeTaizhou Forest Paper, SICER inopa 5.9m yekudonhedza zvinhu kune yayo 5200/900 yakawanda-yakapetwa yakavharwa mapepa muchina. Uye chirongwa ichi chave chiitiko chakakosha cheSICER kupinda China yekumhanyisa mapepa muchina kumagumo. Yayo yakanyanya kushanda kumhanya ndeye 921 m / min, uye yakabudirira kutyora vekunze monopoly. Nekuda kweizvozvo, kuburitswa kwayo kwezuva nezuva kwakapfuura matani chiuru, uye hupenyu hwetambo iri kushandiswa hunosvika mazuva zana nemakumi masere neshanu, zvakaenzana ne38.9% yakareba kupfuura mabhureki ekunze eprojekti yakafanana, ichiwana chinoshamisa chekuchengetedza mutengo. Kubviswa kwezvakaunzwa kunze kwenyika kunounzawo mabhenefiti akati wandei ezveupfumi nemagariro.
SICER's zvedongo yekupfeka zvikamu zvakave zvakagadzirirwa kumazana emitsetse yekugadzira yepakati-yakakwira spidhi pepa muchina, ine trim upamhi pamusoro pe6.6m uye kushanda nekukurumidza kusvika ku1,300 m / min. Zvichienderana nemisika yepamusorosoro-epamba, SICER inosimbisawo kubatana neVoith, Valmet, Kadant zvichingodaro, ichive inotungamira yekugadzira mapepa ekushandisa muChina.
Kutenda kuTaizhou Sango nekuvimba kwaro mune zvigadzirwa zvemumba. Uye ndinokutendai nekushandisa yakanaka manejimendi uye yakanakisa tekinoroji kuvaka chikuva chakanakira epamba zvigadzirwa.
Chokwadi chinoratidza zvekare kuti maChinese nemaChinese vagadziri vanogona kugadzira, kugadzira, uye kushanda yakafara-upamhi, inomhanya-mhanyisa mapepa michina!